Ukhethe ukuzibulala umama ngoba izingane zakhe zingawutholi umsebenzi | News24
Lagos - Umama onezingane ezimbili ezafunda zaze zagogoda, ogama lakhe ngu-Uzoaku, unqume ukuzilengisa ngoMgqibelo ekhaya lakhe eliseMgbakwu, eNigeria.
Kukholakala ukuthi lo wesifazane oneminyaka engu-66 ubudala bese kuphele isikhathi eside ebalisa komakhelwane bakhe ngokuthi izingane zakhe, ezathweswa iziqu eminyakeni eminingi eyedlule, kaziwutholi umsebenzi, kubika iPunch.
Isakhamuzi sakule le ndawo u-Uche Aniouno, uthe: "Ngigcine ukumbona ezinsukwini ezine ezedlule. Ubebalisa ngobuhlungu benhliziyo njengoba izingane zakhe zingawutholi umsebenzi. Kepha angazi ukuthi ngabe yini eholele ekutheni azibulale.
"Ubengowesifazane obesebenza ngokuzikhandla futhi ngeke ngisho ukuthi ubehlupheka. Enye yamadodakazi akhe yagana. Sshaqekile sonke ukuthi uthathe impilo yakhe ngale ndlela."
OLUNYE UDABA: Uzibulele obebhekene nawokudlwengula izingane zomakhelwane
Umfowabo kamufi, uFedrick Nwenu, utshele izintatheli ukuthi besingekho isidingo sokuthi udadewabo azibulale.
UNwenu uthe izindaba zokushona kukadadewabo zimthuse kakhulu.
"Udadewethu ubengenaso isizathu sokuzibulala njengoba ekwazile ukubhukula afundise izingane zakhe zaze zagogoda enyuvesi. Enye ishadile futhi isinezingane. Ngakho angisiboni isidingo sokuthi azibulale."
Okhulumela amaphoyisa uNkeiruka Nwode akatholakalanga ukuba aphawule.